EMzantsi Korea AmaNgqina KaYehova Abanjelwe Ukholo Lwawo
AmaNgqina kaYehova aneminyaka engaphezu kweyi-100 enenkululeko yonqulo kuMzantsi Korea, kodwa ke abo bangavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo abanayo ncam le nkululeko. Nyaka ngamnye, urhulumente welo uvalela abafana abangamakhulu-khulu abangamaNgqina. Ukususela kwixesha leMfazwe yaseKorea ukuza kutsho namhlanje, uMzantsi Korea uye wawatshutshisa ngokungenalusini amaNgqina angafuniyo ukuya emkhosini yaye akenzi necebo lokuba enzele ilizwe ezinye iinkonzo. Waba yintoni umphumo? UMzantsi Korea uye wagweba amaNgqina angaphezu kwayi-18 000 ukuba athothoze entolongweni, xa iyonke iminyaka agwetyelwa yona ingaphezu kweyi-35 000 kuba nje engavumi ukuya emkhosini.
Iimeko Zaphucuka Entolongweni
AmaNgqina ayekade evalelwa phantsi kweemeko ezingaginyisi-mathe yaye evalelwa ithuba elide, kodwa ngoku noko iimeko zaphucuka nezigwebo zehliswa zaya kutsho kwiinyanga eziyi-18. Abaphathi beentolongo bayawavumela amaNgqina amaninzi ukuba abe neentlanganiso zawo zonqulo. Ukongezelela uninzi lwamaNgqina avalelweyo luye lwahlulwa kwizisele ezinezaphuli-mthetho lwaza lwavalelwa namanye amaNgqina. *
Indlela Amanye Amazwe Awubona Ngayo Lo Mba
IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo enomsebenzi wokuqwalasela indlela iBhunga Lamazwe Ngamazwe Lamalungelo Ezopolitiko, iye yavakalisa izihlandlo eziliqela ukuba uMzantsi Korea * uwasingela phantsi amalungelo amaNgqina angavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo. Ngokomzekelo, ngo-Oktobha 25, 2012, le komiti yafumanisa ukuba uMzantsi Korea unetyala ngenxa yokungawahloneli amalungelo abafana abayi-388 abangamaNgqina kaYehova. Le komiti yoleka ngelithi, “ilungelo lokungayi emkhosini liyahambelana nenkululeko yokucinga, eyesazela neyonqulo. Eli lungelo livula ikroba lokuba umntu angayi emkhosini ukuba iinkolelo okanye unqulo lwakhe alumvumeli.” Urhulumente woMzantsi Korea akakatshintshi yaye usaqhubeka ecinezela abafana abaninzi ngokungabaniki inkululeko yokucinga, eyesazela neyonqulo njengoko iKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo ifuna njalo.
Ukuze ubone uludwe lwamaNgqina kaYehova avalelweyo ngenxa yokholo lwawo kuMzantsi Korea, cofa le linki ingezantsi.
Babanjelwe Ukholo Lwabo—KuMzantsi Korea
NgoMatshi 3, 2015
AmaNgqina KaYehova ayi-613 asentolongweni ngenxa yokuba izazela zawo zingawavumeli ukuba aye emkhosini.
Ngo-Oktobha 31, 2014
AmaNgqina KaYehova ayi-597 asentolongweni ngenxa yokuba izazela zawo zingawavumeli ukuba aye emkhosini.
NgoAgasti 31, 2014
AmaNgqina ayi-562 avalelwe entolongweni ngenxa yokuba izazela zawo zingavumi ukuba aye emkhosini.
NgoJuni 30, 2014
Bekukho amatyala angamashumi amabini anesibhozo asamisiweyo kwiNkundla Yomgaqo-siseko abandakanya amadoda ayi-618 avalelwe kuba engavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo.
NgoJanuwari 28, 2014
Umongameli welo ukhulule abafana abangamaNgqina ngaphambi kwexesha, xa bebonke bamalunga ne-100 yaye babanjelwe ukungayi emkhosini; ngoJanuwari 31 kwavalelwa abayi-513.
AmaNgqina ayi-599 avalelwa kuba engavumi ukuya emkhosini.
Uninzi lwamaNgqina asentolongweni ohlulwa kwizaphuli-mthetho aza avalelwa namanye amaNgqina.
NgoOktobha 25, 2012
IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo yafumanisa ukuba uMzantsi Korea wophule umthetho weBhunga Lamazwe Ngamazwe Lamalungelo Ezopolitiko (wenkululeko yokucinga eyesazela neyonqulo) ngokunyanzela amaNgqina ayi-388 ukuba aye emkhosini.
NgoAgasti 30, 2011
INkundla Yomgaqo-siseko ifumanise ukuba izohlwayo ezifunyanwa ngabantu abangafuniyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo azingqubani noMgaqo-siseko waseKorea.
NgoMatshi 24, 2011
IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo ifumanise ukuba uMzantsi Korea awuyithobelanga imithetho yeBhunga Lamazwe Ngamazwe Lamalungelo Ezopolitiko ngoba uye wanyanzela amaNgqina ayi-100 ukuba aye emkhosini.
NgoJanuwari 15, 2009
Enye ikomishoni kwiofisi kamongameli yakhupha ingxelo ethi urhulumente woMzantsi Korea ubekek’ ityala ngokufa kwamaNgqina amahlanu awayevalelwe ukususela ngo-1975 ukuya kutsho ngo-1985, kuba ethobela izazela zawo.
UMzantsi Korea wawuza kwenza amalungiselelo okuba abo bangafuniyo ukuya emkhosini benzele ilizwe ezinye iinkonzo, kodwa loo malungiselelo apatyalaka.
NgoSeptemba 18, 2007
UMphathiswa Wezokhuseleko woMzantsi Korea wathi abantu abangafuniyo ukuya emkhosini ngenxa yonqulo, basenokukhetha ukwenza ezinye iinkonzo, waphinda wathembisa ukuhlaziya imithetho elawula umkhosi.
NgoNovemba 3, 2006
IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo yafumanisa ukuba uMzantsi Korea ubekek’ ityala ngokunyanzela amaNgqina amabini ukuba aye emkhosini.
NgoAgasti 26, 2004
INkundla Yomgaqo-siseko iyayixhasa indlela yokohlwaya abantu abangafuniyo ukuya emkhosini.
Iofisi yomkhosi yayeka ukunyanzela abantu ukuba baye emkhosini nezigwebo zentolongo zehliswa zisuka kwiminyaka emithathu zaya kutsho kunyaka onesiqingatha.
NgoDisemba 1, 1985
UKim, Young-geun wabanjwa kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe, wafela entolongweni ngenxa yokuphathwa kakubi.
NgoAgasti 17, 1981
UKim, Sun-tae wabanjwa kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe, wafela entolongweni ngenxa yempatho embi.
NgoMatshi 28, 1976
UJeong, Sang-bok wabanjwa kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe, wafela entolongweni ngenxa yokubethwa ngokungenalusini nangenxa yokuphathwa gadalala.
NgoMatshi 19, 1976
ULee, Choon-gil wabanjwa kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe, wakrazuk’ udakada ngenxa yokubethwa ngamapolisa, naye wafela entolongweni.
NgoNovemba 14, 1975
UKim, Jong-sik wafa ngendlel’ engaginyisi-mathe emva kokuba ebethwe kanobomi waza wangcungcuthekiswa ngamagosa omkhosi kuba nje engazange wavuma ukuya emkhosini.
UMongamel’ uPark Jeong-Hee waqal’ iphulo eqinisekisa ukuba wonk’ umntu ugayelw’ emkhosini ethand’ engathandi. Amadoda angamaNgqina ayenyanzelwa ukuba angenele umkhosi.
NgoJanuwari 30, 1973
Zaqinisw’ iintambo zomthetho saza isigwebo sabo bangafuniyo ukuya emkhosini senyuka sisuka kwiminyaka emithathu saya kutsho kwelishumi. Abanye babede bagayelw’ emkhosini izihlandlo eziliqela.
Bonke ababengafuni ukuya emkhosini eMzantsi Korea babethothoziswa kwesimnyama.
^ isiqe. 4 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, funda inqaku elithi, UMzantsi Korea Wahlula Amabanjwa AngengomaNgqina Kulawo Azizaphuli-mthetho
^ isiqe. 6 UMzantsi Korea ulilungu leKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo neleBhunga Lamazwe Ngamazwe Lamalungelo Ezopolitiko yaye oko kunika abemi bayo ilungelo lokuba babhalele le komiti nanini na amalungelo abo enyhashwa.
Babanjelwe Ukholo Lwabo—EMzantsi Korea